FaceApp qaabka sawirada uu u badalo ma tahay mid sax ah? - BBC News Somali
FaceApp qaabka sawirada uu u badalo ma tahay mid sax ah?
20 Luulyo 2019
Image caption Qaar kamid ah dadka caanka ah ee sawiradooda la badalay
Waxaa laga yabaa in qof walba oo aad la kulanto uu maalmihii la soo dhaafay isticmaalay barnaamijka FaceApp, dad badan oo adeegsaday, sawiradooda na ku badalay ay buux dhaafiyeen boggaaga aad ku leedahay baraha bulshada, kuwaas oo kusoo bandhigay isbadal ay ku sameyeen sawiradooda iyo sida ay u ekaan karaa marka ay duqoobaan ama xiligii ay yaraayeen.
Barnaamijkan ayaa la kulmay dhaleceyn badan, waxaana laga soo saaray digniin ay ka mid tahay sida dadka soo saaray App-kan ay u adeegsan karaan xogta shaqsiga ee qofka. Mid kamid ah siyaasiyiinta Mareykaka oo ka hadlay arrinkan ayaa hay'adda dembi barista ee FBI-da Mareykanka ugu baaqay inay baaraan barnaamijkan iyo cidda hirgelisay.
Waxaa kale oo su'aal la geliyay sax ahaanshaha sawirada uu badalo, waxaana BBC-da ay adeegsatay sawiro laga qaaday dad caan ah xiligii ay yaraayeen, ayna is-barbar dhig ku sameesay sawiradoodii hore iyo kuwa lagu badalay barnaamijka FaceApp.
Lahaanshaha sawirka GETTY IMAGES/FACEAPP/ALAMY
Image caption Sir Ian McKellen
Waxaa tusaale usoo qaadanay ninkan lagu magacaabo Sir Ian McKellen, waxaana muuqata inay soo baxday wax ka duwan qabka uu barnamaijka FaceApp u saadaaliyay hab u ekaanshaha sawirkiisa marka uu duqoobo.
Sawirka dhanka bidix waxaa la qaaday da'diisu markau ahayd 20 sano, halka kan dhexena lagu badalay barnaamijka FaceApp, kan saddexaad na la qaaday sanadkii 1975-tii.
Lahaanshaha sawirka GETTY IMAGES/FACEAPP
Image caption Sir David Attenborough
Sawirka Sir David Attenborough xoogahaa waxaad moodaa in sidaas uusan uga duwaneyn muuqaalkiisa hadda.
Sawirka koowaad ee bidix-da waxaa la qaaday 1965, waana Sir David Attenborough oo xiligaas ay da'diisu ahayd 39 sano jir, kan dhexena waa sawir lagu farsameeyay App-ka, halka sawirka saddeexaadna uu yahay markay da'diisu ahayd 93 sano.
Image caption Dolly Parton
Dabcan kan Dolly Parton ayaaba kasii daran, waana sawirada fannaanada caanka ah ee Dolly Parton.
Sawirka bidixda kaa soo qabanaya waa fannaanada oo waxaa la qaaday sannadka markuu aha 1977-dii, da'deedu na waxay ahayd 30 sano, kan dhexe na waa mid lagu badalay barnaamijka FaceApp, halka kan midigta kaa soo qabanayana uu yahay horaantii sanadkan 2019-ka, bal adigu qiyaas in sidii la rabay uu u badalay qaab u ekaanshaha da'deeda.
Dadka qaar se waxay leeyihiin way ka da' yar tahay sida uu muujiyay App-ka.
Image caption Morgan Freeman
Sawirka Morgan Freeman waxaad mooda in muuqaalkiisa uu wanaagsan yahay, gaar ahaan sawirka bidixda oo la qaaday sanadkii 1990-kii, xiligaas oo ay da'idiisu ahayd 50 sano.
Hasa yeeshee sawirka lagu badalay barnaamijka FaceApp ayaad moodaa in uu ka da' yar yahay marka loo eego sawirada kale ee laga qaaday.
Image caption Dame Judi Dench
Aktaradda caanka ah ee u dhalatay dalka Ingiriiska, Dame Judi Dench waxaa sawirka koowaad ee dhanka bidixda ah laga qaaday da'deedu markay ahayd 33, waana sanadkii 1967, sawirka dhexe se waa mid lagu badalay App-ka, halka kan saddexaad na uu yahay sanadka 2019-ka oo da'deedu ay tahay 84 sano.
Image caption Arnold Schwarzenegger
Xaqiiqda marka laga hadlo iyo sida FaceApp uu u badalo sawirada la geliyo, waa saawir qurxan. Schwarzenegger, jilaaga caanka ah ee aflaanta Mareykanka ayaa kamid ah dadka sawiradooda la badelay, hasayeeshee waxaad moodaa in hadda uu ka yar yahay marka loo eego sawirkiisa lagu badalay App-ka.
Muxuu yahay App-ka FaceApp?
FaceApp ma ahan mid cusub oo waxaa aad loo hadal hayay laba sano kahor. Barnaamijkan sawirada dadka lagu badalo ee marna qofka ka dhigaya da' yar, marna qof da' ah ayaa waxaa xiligaas ka dhashay buuq badan, kadibna waxaa laga saaray halka laga la soo dago barnaamijyada taleefoonada gacanta.